Faraska Falabella, oo ah nooc aan dusha ka ahayn | Fardaha Noti
Faraska Falabella, oo ah jilib aan dameer ahayn
Rosa Sanches | | Fardaha fardaha
El Faraska Falabella ma aha fardo, xitaa haddii ay u muuqato sidii oo kale. Tani waa faras aad u caan ah oo leh noocyo kala duwan. Weli, waa farduhu kuwa leh isku tayo marka loo eego kuwa fardaha waaweyn oo adduunka laga aqoonsan yahay.
Falabella waxay asal ahaan ka soo jeedaan xerada loo yaqaan 'Recreo de Roca ranch', oo ku taal dalka Argentina. Guud ahaan, fardahaas waxaa loo isticmaali karaa xayiraadda iyo ugu horrayn ahaan xayawaan ahaan. Asalkiisu wuxuu ka yimid faras Shetland, Ahaanshaha awoowayaashiis.
Noocani wuxuu magaceeda ka qaataa Qoyska Falabella, oo xubnahoodu ahaayeen kuwa soo saaray taranka xayawaankan ku jira maxjarka Argentine. Waa natiijada taranka lagu hagayo iyadoo loo marayo iskutallaabyada yaryar iyo, mar dambe iyada oo loo marayo hanaan xul ah oo adag iyo iskutallaabyo iskutallaab ah. Ma ka dheer yihiin 75 sentimitir.
Nooc leh astaamo isku mid ah sida faras caadi ah
Sanado badan farahan yar ee farasku wuxuu soo maray hawlo kala duwan, oo lagu soo barbaariyey England loona dhoofiyey Mareykanka halkaas oo ay caan ku yihiin. Mararka qaarkood waa shirkad raaxo leh oo aad waxtar u leh sidaas jecel iyo waxgarad ay yihiin, inkasta oo asalkiisu xun yahay.
Waxba ma soo jeedinayaan in faraska Falabella uusan lahayn dhammaan wanaagga iyo astaamaha noocyada kale ee sinnaanta. Astaamaheeda hidde-wadaha aan caadiga ahayn ayaa u oggolaanaya taranka dabiiciga ah, fardaha taranka oo leh astaamo la mid ah kuwa ay walaalo yihiin. Intaa waxaa sii dheer, noqoshada dabeecad ahaan dabiiciyan waxay u oggolaaneysaa iyaga inay yeeshaan dareen badbaado leh xaaladaha cimilada ugu daran. Taas oo ka dhigaysa inuu yahay faras leh hanti badan oo uu ku badbaado marka loo eego faraska kale ee caadiga ah.
Awoodiisa aan caadiga ahayn waa wax lala yaabo. Waxay leeyihiin la qabsi weyn iyo dabeecadooda dabacsanIsaga, marar dhif ah lagu arko xayawaannada kale ee loo yaqaan 'petisos', wuxuu Falabella ka dhigay faras ku habboon shirkadda nin iyo inta badan carruurta ku cusub jacaylka ay u qabaan fardaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Faraska Falabella, oo ah jilib aan dameer ahayn
Dhiiga Carabtu wuxuu ku jiraa fardaha casriga ah
Holsteiner, oo ah tartan dhiig dhiig qaba